Data Recovery U Mavericks, Ladnaansho Khasaaray Data ee Mac OS X Mavericks
> Resource > Ladnaansho > Data Recovery u Mavericks, Ladnaansho Khasaaray Data ee Mac OS X 10.9 (Mavericks)
The cusub Mac OS X Mavericks ayaa dhab naga soo bixiyey, waayo-aragnimo fiican oo shaqo ama iyahoo aad Mac. Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqada ah waa in aad weli sii jiri kara khatar ah oo laga badiyay xogta on your computer, wax aad socda Mavericks ama Mountain Libaaxa. Hadda waxaad la casriyeeyay aad Mac in this cusub Mac OS X 10.9, waxa aad sameyn kartid marka aad si qalad ah la tirtiro xog muhiim ah oo ha loo madhiyo qashinka aad Mac?
Ha ka walwalin. Wondershare Data Recovery for Mac ayaa updated ah Mavericks markii hore, si ay dhammaan dadka isticmaala Mavericks sii wadi karo iyadoo la isticmaalayo inuu ka soo kabsado xogta lumay ay computer. Waa maxay soo kabashada macluumaadka u Mavericks samayn karaa? Waxa ay u ogolaataa in aad ka bogsato photos lumay, videos, audio, waraaqaha, archives, emails, iyo sidoo kale macluumaadka iPhone sida xiriirada, fariimaha, qoraalo, jadwalka taariikhda, abuse call oo camera oo duudduuban. Waa maxay dheeraad ah, waxaad u isticmaali kartaa si scan iyo kabsado xogta lumay ka storage devices ugu, ma aha oo kaliya drive Mac adag. Hadda, download version maxkamadda hoose ee lacag la'aanta ah si ay leeyihiin isku day ah oo keligaa.
Fiiro gaar ah: No arrinta meesha aad badiyay xogta aad, fadlan asalka disk ama qalabka ilaa aad ka heshid xogta. Howlgal kasta oo ku disk isha ama qalab ka dhigi kartaa xogta lumay overwritten iyo unrecoverable.
Qabtaan kabashada xog ku saabsan Mavericks in xoogaa tallaabooyin ah
Tallaabada 1. Orod kabashada xogta Mavericks ah
Marka aad u this software kabashada xogta Mavericks, aad arki doonaa suuqa kala muhiimsan ee sida soo socota. Waxaa jira shan doorasho ee aad ka soo xusho. Sida description ee hab kabashada kasta, waxaad dooran kartaa mid ka saxda ah sida ay xaaladdaada u gaar ah. Halkan, aynu qaadan mid ka mid ah hore sida isku day ah: Khasaaray File Recovery .
Tallaabada 2. Sawirka drive adag meesha aad xogta ka lumay ee Mavericks
Ka dib markii gaaritaanka Khasaaray Recovery File doorasho, aad arki doonaa liiska drives adag on your computer. The drives adag dibadda iyo qalabka sidoo kale loo aqoonsan doono iyo waxaa soo bandhigay. Mid ka mid ah oo aad laga badiyay xogta muhiim Dooro iyo guji Scan ku menu ugu sareeya.
Fiiro gaar ah: Haddii xogta aad rabto inaad ka soo kabsadaan waa nooc ka mid ah hal faylasha, waxaad nadiifin kartaa natiijada scan samaynayo nooca faylka hoos liiska drive adag, sida sawir, video, audio, dokumenti iyo in ka badan.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta ka your computer Mavericks
Skaanka aad qaadan doonta muddo yar. Dabadiisna, aad sabab u scan halkaas oo ay dhammaan xogta recoverable on your computer waxaa la helay iyo bandhigay heli doonaa. Iyaga Hubi mid mid. Markaas sax waxyaabaha aad rabto iyo waxaan iyaga ku badbaadin si aad u computer adigoo riixaya Ladnaansho button on sare ee daaqadda.
Fiiro gaar ah: Haddii ay jiraan faylal aad u badan oo natiijada scan, waxaad isticmaali kartaa qalabka kaabayaal ah in ay soo gaabin waqtiga hubinta, sida filter nooca file, shaqo raadinta, iwm Sidoo kale, haddii aad rabto in aad soo kabsado xogta ka dib, waxa ay noqon doontaa fiican si loo badbaadiyo hore natiijada scan si aad u computer. Markaas oo keliya u baahan tahay inaad u soo dhoofsadaan in software ah si ay u qabtaan soo kabashada xog ku saabsan Mavericks ah, aawadood oo ah ammaanka datada.